कार्यकर्ताको चाहना मलाई सभापति भएको देख्ने छ : शशाङ्क कोइराला
नेपाली पब्लिक बिहीबार, मंसिर २५, २०७७
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले पार्टीको महाधिवेशन फागुनमा सम्भव नभएको बताएका छन्। पत्रकारसँग यहाँ आज कुरा गर्दै डा. कोइरालाले क्रियाशील सदस्यता वितरणदेखि दावीविरोधलगायत काम गर्न बाँकी रहेकाले तोकिएका समयमा महाधिवेशन सम्भव नरहेको स्पष्ट गरे।
यी सबै काम गर्नका लागि पनि अझै समय लाग्ने भएकाले पार्टीको महाधिवेशन चैत अन्तिम साता वा वैशाखमा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘मङ्सिर मसान्तसम्म जिल्लाबाट क्रियाशील सदस्य आउनुपर्‍यो। त्यसमा दावी विरोध हुन्छ। त्यसलाई समय दिनुपर्‍यो।’
महाधिवेशनमा आफू कुन पदमा लड्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो लागिनसकेको उनको भनाइ थियो। पार्टीभित्रका जिम्मेवार व्यक्तिसँग कुरा चलिरहेकाले छलफलबाट उम्मेदवार टुङ्गो लगाइने उनले बताए। उनले भने, ‘कार्यकर्ताको चाहना मलाई सभापति भएको देख्ने छ। रामचन्द्रजी, प्रकाशमानजी, शेखर दाइ, सुजातालगायत जिम्मेवार व्यक्तिसँग छलफल भएको छैन।’
कुराकानीका क्रममा उनले अहिलेका अवस्थामा कांग्रेस सरकारमा नजाने स्पष्ट गरे। सरकारमा जाने हो भने पार्टीलाई ठूलो घाटा लाग्ने सङ्घीय सांसद डा कोइरालाको भनाइ थियो।
#काँग्रेस #महाधिवेशन #सभापति #डा_शशाङ्क_कोइराला
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर २५, २०७७ २२:३६
सोमबार, साउन १८, २०७८ १७:३२ गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले गरे पदवहाली
सोमबार, साउन १८, २०७८ १२:०४ सत्तारूढ कार्यदलको बैठक सुरु, सरकारका साझा न्युनतम कार्यक्रमबारे छलफल हुँदै
सोमबार, साउन १८, २०७८ ०७:२६ माधव नेपाल भन्छन् - अध्यक्ष हाेइन, ओलीकै बराबरमा अधिकार चाहियो
आइतबार, साउन १७, २०७८ २०:१४ पालिकास्तरको अधिवेशनबारे एमाले स्थायि कमिटीले गर्याे यस्ताे निर्णय
आइतबार, साउन १७, २०७८ १४:४२ माओवादीले सार्यो केन्द्रीय समिति बैठक, अब साउन ३० गते हुने
बिहीबार, साउन १४, २०७८ १२:३२ उर्जामन्त्री पम्फा भुषाल कमला नदिको कटानबाट प्रभावित क्षेत्रमा
२ चुट्किला पढ्नुस्, माइन्ड फ्रेस गर्नुस् !
पढ्नुस्, १० विद्धानका यी १० प्रेरक भनाइ, जसले तपाईंको सोच बदल्छ
तपाईंको आजः कुन राशिलाई राम्रो ? कुन राशिलाई नराम्रो ?
बङ्गलादेशमा थप पाँच दिनका लागि लकडाउन बिस्तार
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको परीक्षा अनिश्चित